Qodobada ugu weyn oo weli la isku fahmi la’yahay shirka madasha wadatashiga qaranka ee Muqdisho (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Qodobada ugu weyn oo weli la isku fahmi la’yahay shirka madasha wadatashiga qaranka ee Muqdisho (AKHRISO)
Shirka madasha wadatashiga qaran ee ka soconaya magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maraaya marxaladii ugu dambeysay, waxaana ay wararku sheegayaan in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ay weli isku fahmi la’yihiin arrimo aad u culus oo shirkaas horyaala.
Maamulka Puntland ayaa la sheegay in madaxweynahoodu uu doonayo inay helaan xubnaha ugu badan ee labada aqal ee dalka balse waxaa arintaasi kasoo horjeystay xubnaha kasoo jeeda maamulada Somaliland iyo Galmudug.
Sidoo kale shirkaani ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in lasoo gaba-gabeeyn doono maanta oo jimco ah ilaa berri subax iyadoona suura gal ay tahay in dib loo dhigo war-murtiyeedka laga soo saaro shirkaasi ama dib loo balamo shir kale maadaama uu dhawaantaan magaalada Muqdisho ka furmi doonno shirka madaxda urur goboleedka IGAD, iyadoona madaxdii shirkaasi kasoo qeyb-gali lahayd ay kusoo wajahan yihiin magaalada Muqdisho.
Qodobada weli la isku fahmi la’ yahay ayaa waxaa kamid ah:-
Xubno loo kordhinayo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada maamulka Somaliland, kuwaas oo dhaliilsan kordhintii Puntland ee labada xubnood.
Cida loo dhiibayo lacagaha doorashada ee laga doonayo inay bixiyaan dowlad goboleedyada iyo waliba halka la dhigaayo.
Qaabka ay iskula shaqeynayaan ciidamada sugaya amaanka goobaha doorashooyinka iyo cida sida tooska ah ay u hoos tagayaan.
Waxyaabaha laga yeelayo dadka kasoo jeeda gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe oo aanan ka mid aheyn dowlad goboleedyada dalka ka jira balse xubno matalaad ah ku leh.
Iyo in gobolka Banaadir xubno loogu daro Aqalka Sare ee dalka iyo waliba firfircoonida siyaasadeed ee doorashada dalka ay ku yeelanayaan.
Si kastaba ha ahaatee, ilaa iyo haatan lama oga sida uu ku dambeyn doonno is-fahamwaaga ka dhex taagan madaxda ka qeyb galeysa shirka madasha wadatashiga qaran ee ka soconaaya xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana ammaanka goobta uu shirka ka soconaayo uu yahay mid aad loo adkeeyay.
Wixii warakaan kusoo kordha dib kala soco Insha Allaah.